रोमाञ्चक रोमान्स प्रतिको राय – Tandav News
रोमाञ्चक रोमान्स प्रतिको राय
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ माघ २९ गते मंगलवार ११:४० मा प्रकाशित
आभाष गर्दा आनन्द यद्धपि सुन्दा सर्म लाग्ने शब्द प्रेम र कुनै कथित उच्च वर्ग विषेसको परिभाषा अनुरूप कुदृस्टी सहीत अर्थ्याइने अर्को महत्वकांक्षी शब्द सहवास आफैंमा शोषित शब्द हो । प्रेमका पनि आफ्नै रंग छन् । भावनादेखि अंगसम्म, आशा देखि अनुभूतिसम्म, साहसदेखि सपनासम्म, जीवनदेखि देहावसान सम्म । तर कोहीको जिन्दगीमा भने प्रेम छताछुल्ल बनिदिन्छ, आँखाका सागरमा पनि विशेष वेगको छाल ल्याउनेसम्म ।
जिन्दगीकै एउटा महत्वपूर्ण मुर्हत अर्थात् शुभविवाहमा किरण अनि रोशनीको भेट भयो । तर त्यो विवाह दुवैका लागि केही खास थियो, आफ्नो थिएन र पनि विशेष थियो, अविस्मरणीय थियो । सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको सहज स्वीकार गर्ने रोशनीको व्यवहारले किरणको मन लोभ्यायो ।
कलियुगले गालेका कलिला जोवनको अपवाद जो थि रोशनी, मन किन सम्हालिन्थ्यो किरण को । सोही रात, सामाजिक संजालको माध्यमद्वारा, सम्प्रेषण गरिएको एउटा सटिक शब्दावलीको समिश्रणले किरण र रोशनी को सम्बन्धको सुरुआत गरायो ।
आखिर स्ट्रेट फरवार्ड हुनु जो स्वभाव थियो किरण को । नक्कली जालझेल बुनेर नजिकिने युगमा सिधा कुरा गर्ने किरणको बानीले रोशनीको मन पनि लोभियो । दोस्रो, तेस्रो दिन हुँदै देखाभेट कै पहिलो हप्तामा रोशनी र किरण निकै नजिकन थाले ।
विश्वकपको माहोलले सारा जगत तातिरहेको बेलामा रोशनीले किरणको साथमा एउटा खेल प्रत्यक्ष प्रसारणसँगै हेर्ने निर्णय गरिन अनि किरणले सहर्ष स्वीकार गरे । रोमान्टिक सहरको नाउँले परिचित पोखरा सहरको तालको छेउमा छाउने रातको रौनक सायदै भनिरहनु पर्ला । खेलको समय सकिँदै गर्दा रात भने छिप्पिँदै थियो ।
टेबलमा हुक्काको हावा अनि बोतलको वियरले दुवैको आँखामा प्रेमिल भाव हावी भइसकेको थियो । खेलको अन्त्यसँगै रोशनी नजिकैको होटलमा आवास लिने निर्णयमा पुगिन् । मेघगर्जनसहित रिमझिम वर्षाले बाहिरी वातावरण अझै रमाइलो बनिरहेको थियो, यत्तिकैमा किरणले रोशनीलाई होटलसम्म पु¥याइदिने भए ।
तेस्रो तल्लाको ३२७ नम्बर कोठाको चाबी लिएर दुवैजना कोठासम्म पुगे । रात रमाइलो भएको भन्दै किरण बिदा लिँदैगर्दा रोशनीको मनले स्वीकार गरिरहेको थिएन । यत्तिकैमा, अत्याधिक जरुरी काम नभए पानीमा भिज्दै घर नफर्कन रोशनीले सुझाइन् ।
शरीरको चाल अनि मनको भावना विपरीत रोशनीलाई चटक्कै एक्लै छोडेर जाने रहर त किरणको पनि कदापि थिएन, तर रोशानिकै प्रस्तावले भने किरण लाई निकै सहज वातावरण सिर्जना गरिदियो ।
अन्तरदेशीय सिमानाका ठूलाठूला पर्खालले नरोकिने मनुष्यको नाता, एउटै खाटमा सुतिरहेका २ नवजोडीको बीचमा राखिएको सिरानीको नाथे सिमानाले रोक्ने सम्भावना निकै न्यून थियो यद्यपी रात अघि बढ्यो, रमाइला गफको साथमा । मध्यरातको कामुकतालाई सिरकले विस्तारै ढाकिदियो, बाहिरको वर्सादले हरेक चर्का श्वासलाई निस्क्रिय पारिदियो ।
छोटो समयमै नजिकिएको सम्बन्ध रोशनीको वैदेशिक यात्रासँगै संकटमा पर्न थाल्यो । हरेक वाचा वचनमा सीमित हुन थाले, भावनाहरु भत्किन थाले, आशाहरु अस्ताउँदै गए, माया मर्दै गयो… रोशनी निशामा परिणत भई अनि त्यो तेजिलो किरण तेजहीन बन्दैगयो । अनेक प्रयास असफल भए अनि आज दुवै कथित प्रेमको सिकार भइरहेका छन् ।
औकात किन्नुपर्ने आवश्यकतामा लाखौं नेपाली विदेशीदै गर्दा सुन्दर सिउँदो कहिले स्वदेशमै बेचिन्छ त कहिले विदेशमा निर्यात भइदिन्छ, अनि पुनःपीडित बन्छ त्यही युवा पुस्ता ।
माथिको कथा काल्पनिक पात्रको प्रयोजन गरी सम्प्रेषित वास्तविक जीवनको कथन हो, आजका लाखौं युवाहरुको कथा ! हुन त सामित्यता मात्र माया हुन सक्दैन, कोही सँगै भएर तनावमा हुन्छन् त कोही टाढा भएरपनि प्रगाढ मायामा, चाहे जे सुकै होस्, आजको हाम्रो नेपाली समाजमा पश्चिमेली समाजको अन्धाधुन्द अनुसरण गर्ने शैली हावी हुँदै गर्दा हरेकदिन सयौं युवापुस्ता नकारात्मक अनि जवर्जस्ती मानसिक पीडाका सिकार हुन बाध्य छन ।
माया अनि प्रेम आफैंमा विकृत हुन कदापी सक्दैनन् । आजको प्रेमप्रतिको घृणात्मक अनि संक्रिण सोंच आदर्शवादका पारखीहरुको बनावटी व्यक्तित्वको उपज शिवाय अरु केही होइन ।
संसार नै पैसा अनि प्रेमको आडमा चलिरहँदा दुवैप्रतिको आकर्षण अनर्थ अनि अनावश्यक सोच्नु भनेको आवस्यक साक्षरताको कमी बाहेक अरु अर्थ लगाउन सायदै मिल्ला । जीवनका हरेक पाटाहरुलाई वर्गीकरण गर्ने कथित सामाजिक व्यक्तिहरुको झुण्डले मायालाई अनेकार्थी शब्द बनाइदियो त्यो पनि वर्ग विशेष प्रणाली गाभेर ।
आउँदै गरेको प्रणय दिवसलाई मध्यनजर गर्दा, व्यापार र विकृति सतहसम्मै चुलिएको देखिन्छ । जुन दिनसम्म कुनै पनि मनुष्य बीचको सम्बन्ध अनि त्यो सम्बन्धसँगै उत्पत्ति हुने प्रेमलाई सामान्यकरण गरी एकआपसमामा मायाको मुहान फुटाउना सकिँदैना तबसम्म देशको व्यापार घाटामै अनि माया माटोमै सीमित रहन्छ ।
जन्मदेखि मृत्युसम्म हरेक प्राणीलाई मायाको आवश्यकता अत्याधिक रहने तथ्य नकार्न सकिंदैन । जब मान्छेले आड अनि आशा गुमाउन थाल्छ अनि उ अतालिँन्छ । जीवनका हरेक सपनाहरु तुहिन थाल्छन् । कतिले त मानसिक सन्तुलन गुमाउछन् । अनि यो प्रणालीको प्रवद्र्धनले समग्र जनता र देशको स्वास्थ संकटमा पर्न जान्छ र अन्त्यमा विकासको बेजोग हुन्छ । हेक्का रहोस्, सतर्कता सहितको सम्बन्धले समाजमा घट्ने विकृतिसमेत निर्मूल पार्न अवश्य ठूलो भूमिका खेल्छ ।
माया, प्रेम जस्ता जीवनका आधारभूत कुरा प्राप्तिका लागि विशेष दिन नै तोक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको मेरो बिचारमा केवल निन्दनीय बाहेक अरु हुन सक्दैन्र । हरेक उमेरमा आवश्यकताका हदबन्दी तोक्न सकिएला तर सम्भोगविनाको सहयात्रा कुनैपनि अन्तरमन ले सहर्ष स्वीकार गर्न नसक्ने कटु सत्य हुँदाहुँदै जवर्जस्ती भावनालाई कुन्ठ्याउनु भनेको प्राणीको निम्ति प्राणीले नै निम्त्याउने दुश्प्रयास हुनेछ ।
अन्ततः सामाजिक मूल्य मान्यता अनि सांस्कृतिक परम्परालाई आत्मसाथ गर्दै प्रस्ताव बिनाको प्रेम अनि स्वार्थ बिनाको सम्बन्ध स्थापना गर्न कोही खोज्छ भने समाजले गिद्धे नजर लाउनुको कुनै औचित्य रहँदैन, सम्पूर्णमा प्रेम र प्रणय दिवसको शुभकामना !
पाल्पा : मृत भनिएका व्यक्ति जीवित
पाल्पामा चालकका कारण ७० प्रतिशत दुर्घटना
त्रिविका कक्षा भौतिक रूपमा सञ्चालन हुने
चीनबाट ल्याईएको थप ४४ लाख मात्रा खोप असोज ४ गतेबाट लगाईने
आज मोदीको ७१ औं जन्मदिन, भाजपाले २० दिनसम्म जन्मदिन मनाउने